जीवनमा आएका चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it भोक कतिको लाग्छ ? भोक लागे पछी मात्र खाने कि समय-समयमा खाने ? जान्नुहोस्
मानिसको धर्म के हो ? ( भिडियोसहित )
धर्म ईश्वरसित जोडिएको शब्द पनि हो । जीवन मृत्युसँग पनि उत्तिकै सामीप्यता भएको अभिव्यक्ति पनि हो । त्यसैकारणले यो मानिसको…